Canada Myanmar: July 2010
United Democratic Youth League
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် အနီးစပ်ဆုံး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို ၀န်းရံကြပြီး ကျရာအခန်းက ကျွမ်းကျင်ရာ တာဝန်ကို ပါဝင်ထမ်းဆောင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြပါ ။
ဆရာကြီး အား အလေး အနက် ဦးညွတ် ဂုဏ်ပြုရင်း မိသားစုနှင့် အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်း
ပါကြောင်း ပြည်ပရောက် U.D.Y.L ပါတီအနေနှင့်အလေးအနက် မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ဒီမိုကရက်တစ် လူငယ် ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ ချုပ်
(Outside Burma Branch )
ငါ ၏ တောက်ခေါက်သံများ" ဌေးတင့် (နယ်သာလန်) jul21 ,2010
အနှစ် ၇၀ ဆယ်ကျော် ကာလ တလျှောက်လုံး သေနတ်သံ နာကျည်းသံ ပြေးလွှားသံတွေက
နားစည်အိမ်ကို ရိုက်ခတ်ပြီး ရင်ထဲကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နေရာယူလိုက်တယ် ။
အဆုတ်က သန့် ပြီး ဦးနှောက်ကို ပို့ လိုက်တဲ့ သွေးတွေထဲမှာ ပြင်းထန်နေတဲ့ ခံစားမှုတွေပါသွားတယ် ။
ဆက်တိုက် လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ ဦးဆောင်သူ အားမာန်အသံ။
နိုင်ငံတကာရဲ့ ဝိုင်းဝန်း ကူညီဟန်တွေက စာမျက်နှာတွေကတဆင့်
မျက်လွှာကြည်ကို ဖေါက်ပြီး ဦးခေါင်းအနောက်နေရာမှာ မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ် ။
ဘုရားသခင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဝိဥာဏ်လှုံ့ ဆော်မှုတွေနဲ့ အတူ
ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို သိစိတ် နဲ့ မသိစိတ်က အဖြေတခုပေးလိုက်တယ် ။
အသက်ကို ဝအောင်ရှု-အံကိုတင်းတင်းကြိတ်-လက်သီးကို နာနာဆုတ်ထား။ မ
နက်ဖြန်တွေ အများကြီးထဲမှာ အာဏာရှင် ဆိုတာ မပါစေရ ။
တိုက်ပွဲ ဝင်ကြ ...တဲ့။
တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။
လုပ်နိူင်တာတွေထဲက အများဆုံးပဲလေ ။ဒီထက် ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။
ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာကဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ..ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
နယ်ချဲ့ တိုက်ပွဲကို မြေအောက်က ကူညီခဲ့တယ် ။
ဂျပန်တော်လှန်ရေးအတွက် နယ်လှည့်ကပြပြီး ဆက်သားလုပ်ခဲ့တယ် ။
လွတ်လပ်ရေး အရယူရေးအတွက် ပြည်သူတွေကို အနုပညာနဲ့ လှုံ့ ဆော်ပေးခဲ့တယ် ။
အခြေအနေမဲ့စစ်ကျွန်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး သေနတ်တွေ ခိုးဝယ်တဲ့ ..
အနံကြီး ကွင်းကျယ် ..ပညာတဝက် မောင်စောက ခိုးသေနတ်တွေနဲ
့ဗိုလ်ချုပ် အပါအဝင် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြံလိုက်ကြပြီ ။
ဒုတိယအကြိမ် တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး အချိန်ကစပြီး မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုအနူပညာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တယ် ။
ကွဲပြားနေတဲ့ ပါတီတွေ အကြားမှာ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူထုတွေ အကြားမှာ
အနူပညာ စာပေနဲ့ဒေါသမီးတွေကို ငြိမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့တယ် ။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ၊ညီညွတ်ရေး တရားတွေကို သီချင်းစာသားရေးခဲ့တယ်။
ဦးနု က အရူးကို ဘုံမြှောက်လိုက်တယ်။ ရိုးရိုး သာမာန် အရူးမဟုတ်ဘူး။
ပိုက်ဆံကို ဖြတ်လမ်းက ရှာတဲ့ မြင်းလောင်း သမား။
စစ်ထဲဝင်သွားတဲ့ နှာခေါင်းတို နေဝင်း။
၁၉၆၂ မတ်လမှာ အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီ ..တဲ့။
လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေ..လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံး ထောင်ထဲရောက်ကုန်ပြီ။
တတိုင်းပြည်လုံးက နိူင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေပါ မလွတ်ဘူး။
နိူင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်သူ ကင်းမဲ့သွားတဲ့ မြန်မာပြည် ။
တောက်ခေါက်သံနဲ့ အတူ သစ္စာစကား ရင်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ် ။
အနာဂါတ်တိုင်းပြည်အတွက် ဒီမိုကရက်တစ် လူငယ်တွေ မွေးထုတ်ရတော့မယ် ။
ပြည်သူ့ ကြက်ရင်ဘတ်က နို့ ကို စစ်မြွေက မြင်သလို..စစ်မြွေခြေထောက်ကိုလည်း ပြည်သူ့ကြက်က မြင်နိူင်တယ်လေ ။ မြွေမြွေခြင်း ခြေမြင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမသုံးချင်ပါဘူး။အတွေးအခေါ် တဖက်တည်း ဖြစ်နေလို့ ပါ ။
စစ်တပ်ထဲက သူဌေးရူးတွေ အားနည်းချက်ကို လိုက်လံ စနည်းနာပြီး လူငယ်တွေကို သင်ပေးခဲ့တယ် ။
တတိယအကြိမ် တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာက ဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
၁၉၇၄ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံပြီး မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ် စနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်..တဲ့။
ညာချတဲ့ ခေါင်းပေါင်း အတုကြီးတွေနဲ့ သတင်းစာထဲမှာ ယုတ်ပုံ ကြီးတွေမှ အကြီးကြီး...
အသုဘ အခမ်းအနားလို ပါလာတယ် ။
မဆလ အစည်းအဝေးတွေမှာ သေးကြိုပြီး ပေါက်လာပါ..တဲ့ ။
ရေကြည်အိုင်မှာ ချီးအိုး ရှိတယ်။ အင်းစိန် အပါအဝင် ထောင်တွေမှာ ချီးအိုး သေးအိုးရှိတယ်။
ဆူးလေမှာ ညစ်ပတ်နေတဲ့ အများမသုံးချင်အောင် ညစ်ပတ်နေတဲ့ အိမ်သာရှိနေတယ် ။
မဆလ အစည်းအဝေးခန်းမ တွေမှာ အိမ်သာ မရှိပါဘူး။ လက်နက် ဝှက်မှာ စိုးလို့ ..တဲ့ ။
စတုတ္ထအကြိမ် တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်မင်းကြီးက သူ့ တာဝန်အတိုင်း သွားနေခဲ့တယ် ။
အာရှ စပါးကျည် ..ဆီကို ရေချိုး....စပါးတောင်လိုပုံ နေတဲ့ တိုင်းပြည်..... အဆင်းရဲဆုံး မွဲပြီ.....တဲ့။
လည်ပတ်နေတဲ့ ငွေသားတွေ စက္ကူစုတ် ဖြစ်သွားပြီ...တဲ့။
ရက်ပေါင်းများစွာ စဉ်းစားပြီး ရေးထားတဲ့ စာမူခတွေ မဆီမဆိုင် စာရေးလို့ မရတဲ့ စက္ကူစုတ် ဖြစ်ပြီ..တဲ့ ။
ကြေလွယ်လို့ အီအီးတောင် ကုန်းမရတော့ဘူး။
မျက်လှည့်ဆရာ နေဝင်းနဲ့မဆလ အဖွဲ့ သားများပြကွက်လေ ။
﻿ကြဲထားတဲ့ နိူင်ငံရေး မျိုးစေ့လေးတွေ နေရာအနှံ့ အပင်ပေါက်လာကြပြီ။
ဒီမိုကရေစီ မမြင်ဖူးတဲ့ လူငယ်တွေ... မကျင့်သုံးဖူးသေးတဲ့ လူငယ်တွေ.... အခြေခံက ညီညွတ်ရေး ဆိုတာနဲ့ စလုပ်တော့မယ် ။
ရင်ထဲက နာမည်တခု ပေးလိုက်တယ် ။
ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ် ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ ချုပ်။
ပဉ္စမအကြိမ် တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။
ဒီထက်ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာက ဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
ဆူးလေက စပြီး ရန်ကုန်တမြို့ လုံး..... ရန်ကုန်က စပြီး တတိုင်းတပြည်လုံးကို စစ်မြေပြင် သတ်မှတ်ပြီး၊
မြင်းသမား နေဝင်းတပ်တွေ...... ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ မှာ
ဒုတိယမ္ပိ ဂန်းစာမိ.. တတိယမ္ပိ ကျည်ဆံကြည့်......
အာဏာသိမ်း လူသတ်ပွဲ ကျင်းပလိုက်တယ် ။
ပါတီပေါင်းစုံ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးမယ်...တဲ။့
ပြည်သူ့ ကြက်ရင်ဘတ်က နို့ ကို .....စစ်မြွေကမြင်သလို၊ စစ်မြွေခြေထောက်ကိုလည်း ပြည်သူ့ကြက်က မြင်နိူင်တယ်လေ ။
ဒီတခါ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး၊ မြေပေါ်က တိုက်ရမယ့် အလှည့်ရောက်ပြီ။ မှတ်ပုံတင်လိုက်တယ် ။
အဓိက ဦးဆောင်ပါတီကြီးက ဗိုလ်ချုပ်သမီး ပါတီလေ ။
ဘေးက ဝိုင်းရံပေးရမှာက ပါတီငယ်လေးတွေ ။
အတွေ့ အကြုံနည်းပြီး ထောက်လှမ်းရေး မက်လုံးတွေကြောင့်..
ပါတီဝင်တွေ လမ်းတဝက်မှာ လုပ်ကြံမှု ၊ငွေကြေးချမ်းသာမှု ၊ရေနစ်ပြီး ကျဆုံးကုန်ပြီ ။
တတိုင်းပြည်လုံး ပါတီတခုလုံး ဆွေမျိုးတစုလုံး မိသားစုအားလုံး မပါတော့ဘူး။
တကိုယ်ရည် တယောက်တည်း ချမ်းသာရေးဆိုတဲ့ မြင်းလောင်းသမား နေဝင်းမူ ကိုင်ကြပြီ။
နောက်ဆုံးအကြိမ် ၂၀၁၀ မှာ တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။
ပြည်သူ့ ပါတီတွေထဲက နောက်ပိုင်း တက်လာတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်အားလုံး၊
စစ်တိုင်းတပ်မ အမိန့် မလိုက်နာသူ အားလုံး၊ တရားမဝင်တဲ့..မရှိတဲ့ ဥပဒေ အမှုတွေနဲ့ထောင်ထဲပို့ လိုက်ကြပြီ ။
တဘက်သတ် စစ်တပ်က တစညနဲ့ ကြံ့ ဖွံ့ကို ရွေးပေးရမယ်..တဲ့။
အဲဒါ စစ်တပ်က လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲရေးမူ..တဲ့ ။
ဒီထက်ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။ ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာက ဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
ခင်ဗျားက လူငယ်ဆိုတော့ ပိုတတ်နိုင်တယ် ထင်တယ် ။ ဒီထက်ဘာများ ပိုပြီး လုပ်ချင် လုပ်နိုင်ပါလဲ ။ လုပ်ကြစမ်းပါလေ ။
ဌေးတင့် (နယ်သာလန် )
(၁၄.၇.၂၀၁၀ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ ) ညနေ (၅း၀၀)နာရီမှာ.. ဒီမို ရဲဖော်ရဲဖက်၊ ဇာဂနာရဲ့ ဖခင်ဦးအောင်သိန်း(ခေါ်) ကဗျာဆရာကြီး နန်းညွန့်ဆွေ (အသက်-၈၇ နှစ်)ကိုဂုဏ်ပြုပြီး အနုပညာ ဝိဥာဏ်ဖြင့် ရေးသားပါသည် ။)
မြန်မာပြည်က စစ်အာဏာရှင်ကို ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ 
ကွန်ပြူတာ အခြေခံတတ်ဖို့ လိုတယ် ။
ကနေဒါမှာ ပြေလည်တဲ့ ဘဝရပ်တည်မှု တခုလိုတယ် ။
သင့်တင့်တဲ့ အလုပ်ကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ 
အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံ တတ်ဖို့ လိုတယ် ။
အမွေရတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့သွားကတော့
အသက်ရှင်ဖို့ နဲ့ မျိုးဆက်ပြန့် ပွားလို့ ဘဲရတယ် ။
တင်ပြသူ Mr Htay Tint at 2:23 a.m. No comments: Links to this post
ဦးအောင်သိန်း(ခေါ်) ကဗျာဆရာကြီး နန်းညွန့်ဆွေ (အသက်-၈၇ နှစ်)ကွယ်လွန်
မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ အထူး ဝမ်းနည်းပါကြောင်း....
မိတ်ဆွေ ရဲဘော်အပေါင်းတို့ ....
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မြန်မာ့ တော်လှန်ရေးကာလတလျှောက်လုံးတွင် သမိုင်းဝင် တော်လှန်ရေး ခေါင်း
ဆောင်များ သည် သူတို့ မြင်လိုသော တော်လှန်ရေး ပန်းတိုင်မရောက်မှီတွင်ပင် ကွယ်လွန်
ယခု တွင်လည်း ကဗျာဆရာကြီး နန်းညွန့်ဆွေ (အသက်-၈၇ နှစ်) သည် ကျွန်တော် တို့ ၏
U.D.Y.L ပါတီ ( United Democratic Youth League ) ဒီမိုကရက်တစ် လူငယ် ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ ချုပ် ကို စတင် တည်ထောင်ကာစ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကပင် ပါတီ၏ နာယက အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ ပြီး အခြားသော တော်လှန်ရေး နိုင်ငံရေး တာဝန်များကိုလည်း
နောက်ဆုံး အချိန်အထိ ထမ်းဆောင် ရင်း ကွယ်လွန်သွား ခဲ့ လေပြီ ။
(Canada Branch & Malaysia Branch )
2010/7/14 demo waiyen
..ယနေ့၁၄.၇.၂၀၁၀ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ )ညနေ (၅း၀၀)နာရီမှာ..ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရဲဖော်ရဲဖက်၊သူငယ်ချင်း ဇာဂနာ ရဲ့ ဖခင်ဦးအောင်သိန်း(ခေါ်)
ကဗျာဆရာကြီး နန်းညွန့်ဆွေ (အသက်-၈၇ နှစ်)ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဗျာ....
နာရေးကူညီမှုအသငိး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူမှ ပေးပို့လာပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းပါကြောင်း...
Type your summary here.Type the rest of your post here.
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 1:11 p.m. No comments: Links to this post
ငြိမ်းချမ်းရေးအသိတရား ခင်ဗျားတို့မှာ ရှိဖို့လိုပြီ
၀ူးဝူးဝါးဝါး ၊ တူးတူးခါးခါး နာကျင်ပေမဲ့
တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမယ် ၊
ဈေးတွက် တွက်မရ ။
စားပွဲဝိုင်းမှာ ရှင်းသင့်ပြီ ၊
သတ်ကြ ဖြတ်ကြ သွေးမြေကျ
ငတ်မွတ်တဲ့ ဘ၀များကို စာနာ
အမှန်တရား မြင်ဖို့သင့်ပြီ ။
၀ိဝါဒ ကွဲလွဲမှု ညှိနှိုင်းယူ
အကျွတ်တရား ရသင့်ပြီ ။
တရားသေ၀ါဒ ၊ ခ၀ါချကြ
သွေးချောင်းစီးဆဲ ၊ ပြည်တွင်းစစ်မက်
လက်နက်ဈေးကွက် ဖြစ်နေပြီ ။
ဒေါသနဲ့ ပူလောင်မှုတွေ ဖြေဖျောက်
ကမ္ဘာကြီးမှာ စုံးစုံးမြုပ်မယ် .....။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:14 p.m. No comments: Links to this post
ဒီမိုကရေစီလို့ .. ဆိုလိမ့်မယ်
မင်းဟာ ဗမာကျောင်းသားလေး.. ဖြစ်တယ်လေ။
တရားရုံးရဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေထဲမှာ.. ရှိနေတယ်..
မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ ကျောင်းခန်းထဲအိပ်နေမှု.. စတဲ့
မင်းရဲ့ ခုံနံပါတ်လေး “ငို” နေပြီ... ။
“အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက်
သား .. နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်” တဲ့
မင်းတို့ အိမ်ကို ပေးလိုက်ပြီ
သား ပြန် “လု” နေရှာတော့မယ်။
သင်္ဂြိုဟ်ပြီးစီးပါကြောင်း” .. တဲ့
ဘယ်နေရာမှာ ကျဆုံးခဲ့သလဲ ညီလေးရယ်...
ကင်းဝေးပါလိမ့်မယ် ... ။
ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိ လိမ္မာမယ်”
ခေတ်ရဲ့ စစ်မြင်းကလေးလို မင်းဟာ
စစ်ခွေးတွေက ဒီလိုတစစီ ဖြိုဖျက်ခဲ့ကြတာ
စွဲနစ်ကျန်တင်လို့ .. အောင်မြင်မှာပါ
ဒေါင်းအလံကို ပန်းလို ပန်လို့ လှလို့..
ဒေါင်းအလံကို ပန်းလို ပန်လို့
လှလို့ပါပဲ .. ညီလေးရယ်.... ။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:33 a.m. No comments: Links to this post
48 Commemoration of7July (IFBNC)
Conflicting in Terrorism
In China, Junta Secretary 1 Vows 'Democracy, Stability and Development'
China will help Burma Army
The Burmese junta's Secretary 1, Gen Tin Aung Myint Oo, told Chinese officials he met with in Beijing on Monday that Napyidaw is “striving to push forward democracy, national stability and development,” adding that he appreciated China’s support for Burma, the Chinese media reported.
According to the Xinhua news agency, Tin Aung Myint Oo’s comment came during his meeting
with Li Changchun, the 5th ranked member of the Politburo Standing Committee of the Communist Party of China (CPC).
During the meeting, which highlighted the fact that the Burmese general’s visit to China was focused on political issues between the two countries, Li Changchun noted that Burma and China treated each other with “respect and equality” in bilateral ties.
Tin Aung Myint Oo’s words are almost identical to those used by Chinese Premier Wen Jiabao in October 2009, when he told Burmese Prime Minister Thein Sein at the 15th annual summit of the Association of Southeast Asian Nations in Hua Hin, Thailand, that Beijing hoped Burma “will achieve stability, national reconciliation and development.”
Tin Aung Myint Oo, who is also Quartermaster General of the Tatmadaw (Burmese armed forces), kicked off his China trip on Saturday, and Burma's state-run New Light of Myanmar newspaper reported on Sunday that junta-chief Snr-Gen Than Shwe, along with other top officials such as Vice Snr-Gen Maung Aye, Gen Shwe Mann and Prime Minister Thein Sein, were present to send him off.
According to the newspaper, Tin Aung Myint Oo and his delegation were invited by Chinese Vice Premier Li Keqiang, who is alsoamember of the ruling Chinese Communist Party's (CCP) Politburo Standing Committee. Li Keqiang is ranked 7th in the Chinese ruling hierarchy, and observers have tipped him asapossible successor of Wen Jiabao.
Tin Aung Myint Oo's visit to China sparkedarumor among Burmese intellectuals in Rangoon that the junta decided to postpone the scheduled elections. Observers say the rumor was fueled by reports that if the junta shifts its election scheduled for this year, as secretary 1 of the junta, Tin Aung Myint is supposed to inform China, the junta's closest ally.
The past two months have beenasignificantly busy period of diplomacy between China and Burma, with officials from both nations making frequent trips between Naypyidaw and Beijing. Burmese and Chinese official media have reported that these trips are an attempt to boost bilateral ties to mark the 60th anniversary of the Sino-Burmese relationship.
Tin Aung Myint Oo's visit marked the fifth occasion of bilateral talks between Chinese and Burmese senior officials since the beginning of June, and came only one week afteravisit to Burma by Chinese Vice Premier Zhou Tienong, who is also vice chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress and president of the Chinese Association for International Understanding.
Zhou Tienong is not, however,amember of the ruling CPC. He isamember of the Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang (RCCK), one of eight non-communist parties in China.
During his visit to Burma, Zhou Tienong was believed to have discussed two significant issues with Burmese officials, including Prime Minister Thein Sein, who he met with on June 28 in Naypyidaw: Burma's 2010 elections and ethnic issues along the Sino-Burmese border.
Wen Jiabao visited Burma on June 2-3, justafew days ahead of the 60th anniversary. He also raised the issue of border stability with Than Shwe, as well as other bilateral concerns and areas of mutual economic and strategic interest.
Shortly after Wen Jiabao’s trip ended, Gen Fan Changlong, commander of the Chinese People’s Liberation Army’s (PLA) Jinan military region in eastern China, arrived in Burma forafive-day visit.
Gen Shwe Mann, the junta’s No.3and the joint chief of staff of the Burmese Army, Navy and Air Force, met the PLA delegation in Naypyidaw on June 8. Xinhua reported that the two generals exchanged views on matters of common concern between the two countries.
တင်ပြသူ Mr Htay Tint at 1:49 p.m. No comments: Links to this post
To read Burmese
မော်ကွန်းမဲ့ အာဇာနီ များအ ကြောင်း (39)
ငြိမ်းချမ်းရေးအသိတရား ခင်ဗျားတို့မှာ ရှိဖို့လိုပြီ...
ဦးအောင်သိန်း(ခေါ်) ကဗျာဆရာကြီး နန်းညွန့်ဆွေ (အသက်-...
၈၈ ဒေါင်း များ
၈၈ မျိုးဆက်သစ် သူရဲကောင်းများ
အေဘီမြောက်ပိုင်းအုပ်စုလိုက် လူသတ်မူ့ 
ပေးဆပ်သူ ( နေစိုးနိုင် )
မျိုးလွင်အောင် ( ကနေဒါ - တိုရွန်တို )
ဒီမိုကရစ်တစ်လူငယ်ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ ချုပ်
စပိန် ရောက် မြန်မာ များ
ကိုမော် ( Burma )
ကိုကျော်သက်လတ် ( Republic )
ကိုမျိုးဝင်းဇော် ( armydogkiller )
Burma Forum Canada
Canada Myanmar Group
Htun Aung Gyaw
Mr Htay Tint